Jereo ny fomba amam-panao mahaliana any Aostralia | Vaovao momba ny dia
Firenena somary tanora i Aostralia, izay notezaina tamin'ny fifindra-monina avy any amin'ny firenen-kafa, noho izany fifangaroana lehibe ny kolontsain'izy ireo. Na izany aza, tsy maintsy dinihintsika ihany koa ny kolotsaina zanatany, izay manan-danja kokoa hanavotana ny fakan'ny firenena.
Androany dia hahafantatra bebe kokoa momba ny Fomba amam-panao aostralianina, firenena milay sy mahaliana ho an'ny karazana mpizahatany rehetra. Tsy isalasalana fa fifangaroana amin'ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina izay manaitra ny olona rehetra mitsidika azy io.
1 Zava-pisotro Aostraliana
2 Fankalazana any Aostralia
4 Sakafo any Aostralia
5 Ireo aborigine
I Aostralia dia firenena iray izay ahatsapantsika ho tena mahazo aina, satria tsy manana fomba amam-panao izay tsy mitovy amin'ny firenena eropeana izy ireo. Toy ny ankamaroan'ny azy ny mponina dia avy tany Eoropa, nifindra ny fadin-tseranana. Izany no mahatonga ny zava-pisotro ankafiziny dia ny labiera, kafe ary dite mazava ho azy. Tsara homarihina ny fitaomana lehibe anglisy amin'ny gastronomia rehetra. Ny kolontsaina kafe dia mivoatra be ary mahazatra ny mahita toerana misy baristas matihanina mihitsy. Etsy ankilany, ny dite dia tsy mahantra amin'ny trano rehetra, hiarahana misakafo, toy ny atao any Angletera.
Fankalazana any Aostralia
Any Aostralia dia manana fankalazana mahazatra izy ireo, toy ny Taom-baovao na Krismasy, izay ankalazaina amoron-dranomasina matetika. Zavatra tena miavaka izy io, satria any amin'ny ilany atsimo andrefana, ny Krismasy dia mifanojo amin'ny fahavaratra ary saika ny olona rehetra mankalaza zavatra eny amoron-dranomasina. Ireo izay monina any amin'ny hemisphere avaratra dia mahita izany ho zavatra hafahafa tokoa, saingy tsy isalasalana fa izany no toerana mety indrindra handaniana Krismasy hafa. Etsy ankilany, ny kolontsain'izy ireo koa dia naka ny baton Halloween, koa ny 31 Oktobra dia miakanjo daholo ny olona rehetra. Misy andro iray tena miavaka ho an'ny Aostralianina, amin'ny 26 Janoary satria Andro Aostralianina io. Ankalazaina amin'ny andron'ny fanjanahana anglisy any amin'ny kaontinanta izy io, ary na dia tsy misy adihevitra aza ankehitriny, dia mbola andro lavorary hiarahana amin'ny fianakaviana manao piknikika sy mankafy ny hetsika sy kaonseritra kasaina hatao amin'io andro io.
El fomba fiaina aostralianina Somary maivana ny fo. Tsy misy isalasalana fa misy fiovana lehibe eo amin'ny karazan'aina amoron-tsiraka, miaraka amina fomban-dranomasina mahafinaritra, ary ao afovoan-tany, izay misy toeram-piompiana goavambe misy asa sy saha midadasika. Ny ankamaroan'ny mponina dia tsy isalasalana fa mifantoka amin'ny faritra amoron-tsiraka, fa ny any afovoany aostralianina dia tsy tokony hohadinoina, izay mety hahaliana ihany Raha misy zavatra manaitra antsika momba ny aostralianina, dia ny fandraisam-bahiny sy ny fahalalahan'izy ireo, indrindra ny fiheverana ny fitaomana anglisy amin'ny firenena. Izy ireo dia olona misokatra sy falifaly amin'ny ankapobeny, izay mandray olona any ivelany mandray vahiny feno.
Sakafo any Aostralia
Toy ny any amin'ny firenena Anglo-Saxon maro, ny sakafo atoandro dia tsy zava-dehibe loatra, zavatra tsy fantatry ny olona any Espaina amintsika, satria io no sakafontsika voalohany. Any Aostralia, ny sakafo hariva dia zava-dehibe kokoa ary atao eo amin'ny 19.00 ora hariva, satria izy ireo koa dia mifoha alohaloha noho ny eto amin'ny firenentsika. ny sakafo atoandro dia sakafo antoandro ary entina amin'ny 12.30 ora sy sasany hariva izy io, sakafo matsiro aperitifa. Ireo sakafo ireo dia atao fijanonana any am-piasana, izany no mahatonga azy ireo maivana, satria mazàna mitohy hatramin'ny dimy hariva ny andro.
Amin'ny sakafo dia mila manamboatra a ianao manonona manokana ny barbecue. Miaraka amin'ny toetrandro mahafinaritra toy izany amin'ny ankamaroan'ny taona, ny barbecue dia lasa ampahany lehibe amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny aostraliana. Tian'izy ireo ny mankalaza barbecue matetika ary amin'ny ankamaroan'ny trano dia misy zaridaina kely afaka misakafo any ivelany miaraka amin'ny barbecue malala-tanana.
Miaraka amin'ny fanjanahana dia tonga ny fihenan'ny kolotsaina aboriginal tamin'ny fahatsapana fa nibodo ny faritaniny ary noraisina ho olom-pirenena kilasy faharoa izy ireo. ny Olan'ny olona Aborigine mbola mafana izy ankehitriny, na dia ankehitriny aza dia tafarina ny fomba amam-panao sy ny fomba fiainany. Afaka mianatra bebe kokoa momba ireo izay nonina Aostralia talohan'ny fifindra-monina eropeana isika. Tsy ho vitanao ny hanohitra ny filalaovana Didgeridoo hamerina ireo feo hafahafa izay mifandraika mivantana amin'i Aostralia.
Any Aostralia dia misy a kolontsaina ara-panatanjahantena lehibe. Ny iray amin'ireo ankafizinao dia ny fitetezana onja, izay azo zahana amin'ny morontsiraka tsy hita isa manamorona ny morontsiraka. Betsaka ny sekoly misitrika afaka mankafy kilasy sasany amin'ny morontsiraka Australia mahafinaritra. Etsy ankilany, ny rugby dia tena zava-dehibe, ka tsy tokony tsy hohadinoinao ny fotoana hahitana lalao mahaliana amin'ity fanatanjahantena mitaky andraikitra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Fomba amam-panao aostralianina
Fomba amam-panao Kanadiana
Fomba amam-panao any Egypt